अर्थ/बजार Archives - Page2of 201 - Sawal Nepal
रोकिएन निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि, सिमेन्ट, डण्डी र इँटाको भाउ कति पुग्यो ?
निषेधाज्ञा केही खुकुलो हुनासाथ निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्न थालेको छ । बैशाख १५ गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरु हुँदा देशका विभिन्न जिल्लामा निर्माणको काम भईरहेको थियो । सोही मौका छोपेर निर्माण सामग्रीको भाउ बढाउन थालिएको हो । यो क्रम अझै पनि चलिरहेको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ । निषेधाज्ञाले सबैजसो क्षेत्र ठप्प प्रायः रहँदा पनि निर्माण
आज कतिमा हुँदैछ सुनचाँदीको कारोबार ? हेर्नुहोस मूल्य सहित
काठमाडौं । साताको कारोबारको तेस्रो दिन मंगलबार अर्थात असर १ गते सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । सोमबार प्रतितोला ९३ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छापावाला सुन आज स्थिर रहेर सोहि मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । यता चाँदीको मूल्य भने १० रुपैंयाँले घटेर प्रतितोला १ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
जीवन विकास लघुवित्तलाई १९ करोड ७७ लाख ३० हजार बराबरको आइपिओ ल्याउन अनुमति
काठमाडौं । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई सर्वसाधारणका लागि रू. १९ करोड ७७ लाख ३० हजार बराबरको १९ लाख ७७ हजार ३०० कित्ता आईपीओ विक्री गर्न जेठ ३० गते अनुमति दिएको हो । कम्पनीले २०७७ साल फागुन १७ गते आईपीओ निष्कासनको लागि बोर्डमा
युनियन लाइफ र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड
युनियन लाइफ र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेको छ। दुबै कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको अनुमाति माग्दै जेठ ९ गते बोर्डमा आवेदन दिएको हो। युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले हाल कायम जारी पूँजीको ३० प्रतिशत अर्थात ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्काशन
नेप्से तीन हजार अङ्कको कीर्तिमान विन्दुमा, आज पनि झन्डै १९ अर्ब रुपैयाँको कारोबार
काठमाण्डाै – शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले तीन हजार अङ्कको कीर्तिमानी विन्दु पार गरेको छ । नेप्से साेमवार (आज) ४२ दशमलव ७२ अङ्कले बढेर तीन हजार २५ दशमलव ८३ विन्दुमा पुगेको छ । नेपाली शेयर बजारको इतिहासमा नेप्से पहिलाे पटक तीन हजारको विन्दुमा पुगेको हो । आज बैंकिङ समूहको शेयर साढे ५२ अङ्कले, होटलको एक सय
आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य एके दिन अधिकतम ६०० रुपैयाँले घट्न पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुन प्रतितोला ६०० रुपैयाँले घट्दै ९३ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको हो । यस्तै, आज तेजाबी सुन समेत ६०० रुपैयाँले नै घट्दै ९३ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको छ । महासंघका अनुसार यता, चाँदीको मूल्य
हेर्नुहोस सुनको मूल्य, कति पुग्यो आज ?
नेपाली बजारमा शुक्रवार सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । यस दिन छापावाल सुन प्रति तोला ९४ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो दिन यस्तो सुन प्रति तोला ९३ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस दिन तेजाबी सुन प्रति तोला ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ
घट्यो सुनको मुल्यो
बिहीवार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा केही गिरावट आएको छ । यस दिन छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला ९३ हजार ९ सय कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो दिन यस्तो सुन ९४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस दिन चाँदी प्रति तोला १ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार
सीइडीबी हाइड्रोपावरको कारोबार खुला, सर्किट लागेर बढ्यो भाउ
काठमाडौं : सीइडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर भाउमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेप्सेमा बुधबार यसको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ४१६ रुपैयाँमा भएको थियो । त्यसपछि लगातार भाउ बढ्दै सर्किट लागेको हो । बुधबार बिहान ११ः२५ बजेसम्म सीइडीबीको सेयर भाउ ९.८६५ ले बढेर प्रतिकित्ता ४५७ रुपैयाँ पुगेको छ । ‘सीएचडीसी’ संकेतमा यसको कारोबार भएको छ ।
बुधबार नेपाली बजारमा सुन प्रतितोला एक सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला एक सय रुपैयाँले बढेर ९४ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको हो । त्यस्तै तेजाबी सुन आज प्रतितोला एकसय रुपैयाँले नै बढेर प्रतितोला ९३ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यता चाँदी भने मंगलबारको तुलनामा प्रतितोला